အိပ်စက်ခြင်း အယူအဆ အလွဲများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အိပ်စက်ခြင်း အယူအဆ အလွဲများ
1. တစ်ညလုံး မနိုးတမ်းအိပ်မှ အိပ်ရေး၀တယ်
ဘယ်သူမှတစ်လျှောက်လုံး မနိုးတမ်းမအိပ်နိုင်ပါ။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်တယ်ဆိုသူများပင်2ကြိမ်၊3ကြိမ်လောက် နိုးကြတယ်။ နိုးကြောင်း မသိကြခြင်းဖြစ်တယ်။ တစ်ခါနိုးရင်3မိနစ်ခန့်ကြာတယ်။ အလိုလို အိပ်ပျော်သွားတယ်။ နိုးခြင်းမှာ ပတ်၀န်းကျင်၌အန္တရာယ်ရှိ/မရှိ ထောက်လှမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်မရှိလို့ဆုံးဖြတ်ရင် အလိုလိုအိပ်ပျော်သွားတယ်။ နိုးပြီး ပြန်အိမ်မရရင် အိပ်စက်ခြင်းပြဿနာအချို့ ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ (ဥပမာ - အရက်ကြောင်ခြင်း၊ ဆေးကြောင်ခြင်းမျိုး ဖြစ်တယ်)။
2. ရှစ်နာရီပြည့်အောင်အိပ်မှ အိပ်ရေး၀တယ်
သြစတြေးလျနိုင်ငံ “အိပ်စက်ခြင်း” ဖောင်ဒေးရှင်းကပြုလုပ်ထားတဲ့ လေ့လာမှုများအရ လူတစ်ယောက် တစ်ညကို အိပ်ချိန်7နာရီမှ9နာရီကြားရှိသင့်တယ်ဆိုထားတယ်။ လူတစ်ဦးချင်းအတွက်မှာမူ ပတ်၀န်းကျင် အနေအထားနှင့် ခန္ဓာကိုယ် လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး အိပ်ချိန်လိုအပ်ချက်အနည်းအများရှိပါတယ်။ အသက်ကြီးရင့် လာရင် အိပ်ချိန်လျော့နည်းသွားတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်ရဟန်းတော်အချို့မှာ အိပ်ချိန်သီးခြားမရှိဘဲ တရားအားထုတ်မှု ရှိရင်ပင် မေတ္တာပွား၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းစီးဖြန်းနိုင်တယ်။
3. သန်းခေါင်မတိုင်မီအိပ်မှ အိပ်ရေး၀တယ်
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်ချိန်ဟာပြင်ပနာရီပေါ်မှာ မူမတည်ပါ။ လူတစ်ဦးချင်းစီရှိ ဇီ၀နာရီပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ည 11 နာရီ၊ 12 နာရီ ထိုးနေတဲ့တိုင် အတွင်းနာရီက နောက်ကျကျန်ရစ်လို့လင်းအားကြီးအချိန်မှ အိပ်ပျော်သူများ ရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်။ မိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီ၀နာရီကျင့်စဉ်ကအိပ်ချင်မှပဲအိပ်တဲ့ သဘောဖြစ်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ဘယ်အချိန် အတက်ကြွဆုံးဖြစ်တယ်။ ဘယ်အချိန် အအိပ်ချင်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိထားကြည့်ပြီး နှစ်နှစ် ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်ကြဖို့ ဂရုပြုကြရပါမယ်။
4. အသက်ကြီးသူတွေ အိပ်ချိန်ပိုတိုးတယ်
အသက်ကြီးရင့်သူများမှာ ပျမ်းမျှ7နာရီလောက် အိပ်စက်တတ်ကြတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ လူငယ်ပိုင်းက ရှစ်နာရီ၊ ကလေးငယ်များက ဆယ်နာရီ၊ အသက် 60 ကျော်များက6နာရီလောက် အိပ်ရင် အိပ်ရေး၀တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ဇီ၀နာရီပြောင်းလဲမှုက အသက်ကြီးလာလေ၊ ညအိပ်နေစဉ် မကြာမကြာ ပိုနိုးစေလို့အိပ်ချိန်လျော့ လာတယ်။ အကြောအခြင် တက်တာပါလာတယ်။ ဘ၀အမောတွေ၊ ဘာသာရေးတရားအားထုတ်မှုတွေ ပိုလာလို့ အိပ်ချိန်လျော့သွားတာဖြစ်တယ်။
5. လပြည့်ညမှာ အိပ်မရဘဲ ဖြစ်တတ်တယ်
လပြည့်ညဟာ လူကိုအိပ်မရအောင် ပိုပြီးလုပ်တတ်တယ်လို့ လူတော်တော်များများကယုံကြည်ကြတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များ စနစ်တကျ လေ့လာထားတာက လပြည့်ညဟာ လူတွေရဲ့အိပ်စက်မှုအပေါ်ဘယ်လိုမှ အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ထူးခြားသက်ရောက်မှုမရှိဆိုတာပါပဲ။
6. အိပ်ခန်းအေးချမ်းနေမှ အိပ်ရေး၀တယ်
အိပ်ခန်းဟာ ဆူညံမှုမရှိဘဲ အေးချမ်းနေမှ အိပ်ပျော်မယ်လို့ တစ်ထစ်ချမှတ်ထားရင်မှားမယ်။ အိပ်ပျော်ဖို့ အကောင်းဆုံး အပူချိန်က 18 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ၀န်းကျင်ဖြစ်တယ်။ သိပ်အေးလွန်းရင် သူကအိပ်ပျော်ဖို့ ခက်သလို၊ ပူအိုက်လွန်းရင်လည်း အိပ်ရခက်တတ်တယ်။ ဆောင်းညတွေမှာ ပြတင်းပေါက်တွေ လုံအောင်လိုက်ပိတ်၊ မီးအပူဓာတ်နွေးနွေးနဲ့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ဖို့ ပိုအထောက်အကူဖြစ်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ အခန်းလုံလွန်းရင် အောက်စီဂျင်လျော့နည်းလို့နိုးတတ်တယ်။
7. မအိပ်ခင် ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် ပိုပြီးအိပ်ကောင်းမယ်
“လူဟာသိပ်ပင်ပန်းရင် အိပ်ပျော်လွယ်တယ်” ဆိုတဲ့ တလွဲယုံကြည်မှုကနေ စလာတာပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရင် ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်မြင့်တက်လာတယ်။ လူက ပိုမိုတက်ကြွလာတယ်။ အိပ်ချိန်နှင့်နီးနေချိန်မျိုးမျာ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ခြင်းမျိုးရှောင်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်ဟာ အိပ်ချိန်နဲ့ အနည်းဆုံး2နာရီကျော်ကျော်ကွာရမယ်။ ၀ိတ်အားအလွန်စိုက်ထုတ်လုပ်ကိုင်ရတဲ့ အလုပ်မျိုးကို အိပ်ချိန်နီးချိန်မှာ မလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ ညနေဘက် နေ့စသ် နာရီ၀က်မှတစ်နာရီ ရွရွပြေး၊ လမ်းလျှောက်၊ စက်ဘီးစီး၊ ရေကူး လုပ်လိုက်ရင်ပိုလျှံနေတဲ့ ကယ်လိုရီတွေ ချေွးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသလို၊ သွေးလှည့် ပတ်ခြင်း၊ သွေးထဲအောက်စီဂျင်ရောက်ရှိခြင်း ပိုကောင်းသွားလို့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်နိုင်ပါတယ်။
8. တီဗီကြည့်ရင်း အိပ်သင့်တယ်
တီဗီကြည့်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတတ်တာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ မိမိအိပ်ပျော်သွားလျက်ပဲ တီဗီမှအလင်းနှင့် အသံတို့က ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဦးနှောက်ထဲ သက်ရောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ လူဟာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ခြင်း မရှိဘဲ မိုးလင်းရင် အိပ်ရေးမ၀တဲ့ ခံစားချက်မျိုးနဲ့နိုးလာတယ်။ လက်ပ်တော့၊ ဖုန်းတွေ၊ နှိုးစက်နာရီတွေက အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်။ အိပ်ရာထဲ ဖုန်းထားအိပ်တာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကြည့်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတာဖြစ်နိုင်ပေ မယ့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး အိပ်ပျော်သွားတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။
9. အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် အိပ်ဆေးများက အိပ်ရလွယ်တယ်
ကမ်ဘာကျော်ရော့်ခ်စတား အဲလ်ဗက်ပရက်စလေ၊ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်တို့ဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကြွဆေးတွေကြောင့် မအိပ်စက်နိုင်ကြဘူး။ ကိုယ့်မိသားစုဆရာ၀န်နဲ့ အိပ်ဆေးထိုးခံကာ အိပ်စက် တတ်ကြတယ်။ “အိပ်ဆေးမတိုး” တဲ့အခါ ခွဲစိတ်ခန်းသုံး “မေ့ဆေး” တစ်မျိုးကို သုံးစွဲရင် ဆေးလွန်လို့ သေဆုံးခဲ့ကြရတယ်။ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား တွေဟာ ပထမပိုင်းမှာ အိပ်ကောင်းသလိုလိုရှိပေမယ့်၊ စွဲလမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း မအိပ်စက်နိုင်ကြတော့ပါ။ အရက်စွဲသူများဆိုရင် အရက်မူးအောင်သောက်လည်း မအိပ်တော့လို့၊ စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေ သွားရောက်ပြသပြီး အရက်၊ မူးယစ်ဆေးတို့မှ အနားပေးလိုက်မှသာ အိပ်ဆေးအကူအညီနဲ့ အိပ်စက်နိုင်တော့ တယ်။ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ စိတ်ကြွဆေးပြားတွေက အိပ်စက်ခြင်းကိုရေရှည်ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။
Vol: 13, No: 43,3- 8 - 2016